ANNOUNCEMENT | MyanmarEmbassy
Myanmar has launched an online visa (e-visa) application system since 1st September 2014 for only Tourist and Business travellers. …….
(Hot Line 24/7)
မြန်မာနိုင်ငံသားများ (၂၄) နာရီ အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်နိုင်မည့် အောက်ဖော်ပြပါ အရေးပေါ် တယ်လီဖုန်းလိုင်း (Hot Line 24/7) များ ….
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုံစံ(၁၅)ပေးပို့လာသည့်နိုင်ငံပြင်ပရောက်ကြိုတင်မဲပေးလိုသည့်မဲဆန္ဒရှင်များအနက်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသူစာရင်းနှင့်ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးရမည့်ရက်သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း…….
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကြားဖြတ်ရွှေးကောက်ပွဲလျာထားလုပ်ငန်းစဉ်အချိန်စာရင်းအသိပေးကြောငြာခြင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ်များအတွက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအား ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ရက်နေ့ (စနေနေ့)တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ …….
မီးဘေးသင့်ပြည်သူများ အတွက် လှူဒါန်းနိုင်
ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အလှူရှင်များထံမှ အလှူငွေများအား အောက်ဖော်ပြပါ
ငွေစာရင်းအမှတ်များသို့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ရန် ….
သော မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် သတိပေးနှိုးဆော်ချက်
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်း ၀ယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန် ခဲ့သည့် အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၉ / ၂၀၁၅ အားတင်ပြချက်
ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား မဲဆန္ဒရှင်များ မဲပေးနိုင်ရန်အတွက် ပုံစံ (၁၅) ဖြည့်စွက်ပေးရန် ကိစ္စ